| မဟာဗျူဟာ Binary Options ကိုခွရပ်ထား အကောင်းဆုံး Binary Options ကိုမဟာဗျူဟာ - စတော့အိတ်အွန်လိုင်း Investing
binary Options ကို Straddle မဟာဗျူဟာ
ပင် Binary Options ကိုဈေးကွက်ထဲမှာ, ကုန်သွယ်ရေးရန်သင့်ပိုက်ဆံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဟာဗျူဟာများလိုအပ်သည်။
အကောင်းဆုံးကုန်သည်များအများအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောမဟာဗျူဟာများချမှတ်။ သူတို့ကပိုက်ဆံနောက်ဆက်တွဲငွေပမာဏကိုဆုံးရှုံးဖို့မလိုဘဲ, ၎င်းတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထဲကအများဆုံးစေနိုင်ရန်အတွက်သူတို့ကိုပေါင်းစပ်။
နှစ်ဦးစလုံးအသစ်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များကအသုံးပြုလူကြိုက်အများဆုံးမဟာဗျူဟာတစ်ခုမှာ Straddle မဟာဗျူဟာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Binary Options ကိုစျေးကွက်များတွင်ဤနည်းဗျူဟာကုန်သည်တစ်ဦးနောက်ခံပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးနှုန်းအတက်အကျမျှော်သောအခါအသုံးပြုသောပေမယ့်လှုပ်ရှားမှုများ၏ဦးတည်ရာမသေချာဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ခေါ်ဆိုခများနှင့်ရလဒ်နှစ်ခုလုံးအနေဖြင့်အဘယ်အကျိုးကိုရရန်ကုန်သည်ဖွများနှင့်စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲအလုံအလောက်သိသာသည်အဘယ်မှာရှိကိစ္စများတွင်, တဦးတည်း option နဲ့အတူအနိုင်ရပိုက်ဆံပမာဏကိုအခြားတဦးတည်းဝယ်ယူ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်နေဆဲအချို့အပိုအမြတ်အစွန်းချန်ထားမည်ရွေးချယ်စရာထား ဘက်ခြမ်းမှာ။
သို့သော်ခေါ်ဆိုခများနှင့်ထားရွေးချယ်စရာတစ်ချိန်တည်းမှာဝယ်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ထွက်အဲဒီမှာပွဲစားများ၏အဘယ်သူမျှမကဤခွင့်ပြုပါတယ်။ နှစ်ခုကွဲလွဲ options များစောင့်ကြည့်ခံနေရသည့်လမ်းကြောင်းသစ်၏သက်ဆိုင်ရာထိပ်ပိုင်းနှင့်အောက်ခြေချထားပါသည်။ ဒီတော့အခြေခံအားဖြင့်, ပထမဦးဆုံး option ကိုဝယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာ, အခြားတဦးတည်းလည်းကုန်သည်ကဝယ်ယူနေသည်။ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးတစ်ချိန်တည်းမှာသက်တမ်းကုန်ဆုံးဖို့သတ်မှတ်ထားခံရဖို့ရှိသည်။
ဥပမာ, အစည်းအဝေးယနေ့အပေါ်နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာတင်ဆက်မယ့်ကုမ္ပဏီမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ဤအစီရင်ခံစာအချို့မျှော်လင့်ချက်များ, သင်တန်း, ရှိပါတယ်။ သူတို့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနေတယ်ဆိုရင်, ကုမ္ပဏီရဲ့စတော့ရှယ်ယာများ၏စျေးနှုန်းထမြောက်ကြလိမ့်မည်။ မရလျှင်, စတော့ရှယ်ယာများ၏စျေးနှုန်းခြောကျကြပါလိမ့်မယ်။
ဒါက Straddle မဟာဗျူဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်စုံလင်သောအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပါသည်: စျေးနှုန်းတစ်လှုပ်ရှားမှုနီးပါးသေချာပေမယ့်လှုပ်ရှားမှုများ၏ဦးတည်ချက်ဝိုးတဝါးပါပဲ။ တူညီတဲ့စျေးနှုန်းမှာထားနှင့်ခေါ်ဆိုခရွေးချယ်စရာနှစ်ခုလုံးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့်, ကုန်သည်, အရှင်သည်သူ၏အဆုံးအပေါ်တစ်ဦးအမြတ်အစွန်းရလဒ်အဘို့အခွင့်အလမ်းပေးနှစ်ခုလုံးရလဒ်များဖုံးလွှမ်း။ အဆိုပါကုန်သည်, ပထမသူ့ကိုပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ပုံရသည်သော option ကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့်စတင်ပါထို့နောက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဇယားအတိုင်းလိုက်နာခြင်းနှင့်လိုအပ်ပါကတစ်ဘဏ္ဍာရေးအမြတ်သေချာဖို့ခြားနားတဦးတည်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
ဒါကြောင့်မည်သည့်ကုန်သည်ရိုးရှင်းစွာဆိုပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ရွေးချယ်စရာများဝယ်နိုင်နှင့် Binary Options ကို Straddle မဟာဗျူဟာ အသုံးပြု. အမြတ်အာမခံရမည်လော
အဘယ်သူမျှမအခြေခံပစ္စည်းများ၏စျေးနှုန်းအတက်အကျသွားကြောင်း 100% သေချာစေနိုင်ပါတယ်။ ပိုပြီးရောဂါဖြစ်ပွားမှုအတွက် Straddle မဟာဗျူဟာ (တစ်ခါတစ်ရံပင်နှစ်ဆအမြတ်!) အမြတ်အစွန်းအတွက်အဆုံးသတ်မဟုတ်ထက်သော်လည်းအဆိုပါကုန်သည်နေဆဲနှစ်ဆဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်ရင်ဆိုင်နေရသည်။
မျဉ်းပေါ်တွင်စစ်မှန်သောဘဝပိုက်ဆံချပြီးမီ, အပေါ်ကျင့်သုံးမယ့်သရုပ်ပြအကောင့်အထူးသဖြင့်အခုမှစအဘို့, စံပြဖြစ်ပါတယ်။ အလားအလာပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်က straddle-ထိုက်ခြင်းရှိမရှိကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အကြီးအလေ့အကျင့်ပါ! ဒီနည်းလမ်းကိုပြည့်စုံအချို့အချိန်ဖြုန်းရေရှည်မှာအများကြီးအကူအညီဖြစ်စေနိုင်သည်။
အစဉ်အမြဲသတိရဖို့နောက်ထပ်အရာမျှမကိစ္စသင်အသုံးပြုဘယ်အရာကိုမဟာဗျူဟာ, နှံ့နှံ့စပ်စပ်စျေးကွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတစ်ဦးမဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကအသေးစိတ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအမြတ်အစွန်းအရောင်းအများအတွက်အခြေခံအိပ်လေ၏။
စိတျထဲတှငျဤအရာအလုံးစုံကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ထုတ်သွား! Binary Options ကိုကုန်သွယ်၏ကြီးစွာသောကမ္ဘာကြီး Explore, နည်းနည်းအန္တာရာယ်ကြီးသားအပေါင်းတို့, သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးရွေ့လျားသုံးပါနဲ့နောက်ဆုံးမှာအချို့ငွေပါစေ!
Tags: အကောင်းဆုံး binary options များနည်းဗျူဟာ, အကောင်းဆုံး binary options များကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ, binary options များ straddle နည်းဗျူဟာ, binary options များမဟာဗျူဟာဥပမာခွရပ်ထား, ထို binary options များဗျူဟာ, အလုပ်လုပ် binary options များနည်းဗျူဟာ, binary options များကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ, အလုပ်လုပ် binary options များကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ, binary options များမဟာဗျူဟာ Forex, straddle binary options များနည်းဗျူဟာ